Seenaa Garaa Namaa Nyaatuu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSeenaa Garaa Namaa Nyaatuu
Guutaa jedhama. Jiraataa magaalaa Mandii ganda 04 dha. Maatiin isaa baayyee harka qalleessa. Guutaan karaa gubbaa taa’ee qophee namaa qulqulleessee maatii isaa jiraachiisa. Abbaan isaas utuu humni isaa hin dhadhabiin hojii guyyaa hojjetee Guutaa barsiisaa ture. Harmeen Guutaa illee akkuma kana mana namaa keessa gugguftee jireenya maatii isheef cabdee dhiigaa turte. Garuu lamaan isaanii booda umuriin isaanii waan deemeef hojii kamiin iyyuu hojjechuu hin dandeenye. Baayyee umuriidhan raagaan.